Dabere na akụkọ kachasị ọhụrụ sitere na LEDinside, nkewa nke ụlọ ọrụ nyocha nke ahịa TrendForce, 2018 Global LED Digital Display na Micro LED Display Market Outlook, n'ihi nlaazu akụ na ụba, ahịa LEDdisplay zuru ụwa ọnụ enwebeghị oke uto na ọchịchọ ahịa nke ngosipụta ọdịnala belatara. Otú ọ dị, ekele maka mmepe nke ọkụ ezigbo ngosi ngosi n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ngosipụta ahịa ahịa na-abawanye ọzọ. Na 2017, zuru ụwa ọnụ Ikanam ngosi ahịa n'ọtụtụ ruru USD 5.092 ijeri. Ngosiputa nke ime ụlọ mara mma (≤P2.5) ga - aga n’ihu na - eto uto mgbe imosiri mmepe ngwa ngwa n’ime afọ ole na ole gara aga, ọnụ ahịa ahịa na 2017 bụ ijeri USD 1.141 na CAGR nke 2017-2021 ga - eru 12%.
Ngosipụta Market Market
Na 2017, zuru ụwa ọnụ Ikanam ngosi ahịa n'ọtụtụ ruru USD 5.092 ijeri. Ngosiputa nke ime ụlọ mara mma (≤P2.5) ga - aga n’ihu na - eto uto mgbe imosiri mmepe ngwa ngwa n’ime afọ ole na ole gara aga, ọnụ ahịa ahịa na 2017 bụ ijeri USD 1.141 na CAGR nke 2017-2021 ga - eru 12%.
Na ìhè nke Ikanam ezi pitch ngosipụta si ngwa, ọ nwere ike kere n'ime anọ edemede dị ka e gosiri n'okpuru. Ngwa mgbasa ozi (Alọ Nzukọ); Andlọ nche na nchekwa (nyocha onyunyo na ime njikwa); Commercial ngosi ngwa (gụnyere azụmahịa ngosi, ngosi, ụlọ nzukọ nzukọ, ụlọ nzukọ nkwari akụ na ihe nkiri, wdg); ngwa ọha na ngwa ahịa (ọkachasị gụnyere ngosipụta n'èzí, ọdụ ụgbọ elu, igwe na ngwa mkpọsa). Ngosiputa ahia, oha obodo na uzo ahia nwere ike inwe oganihu n’iru. Ikanam ngosi ga-eji nwayọọ nwayọọ dochie DLP na LCD.
Na 2016, zuru ụwa ọnụ Ikanam ngosi ahịa n'ọtụtụ bụ USD 5.001 ijeri na n'elu asatọ na-emepụta were 38% nke ụwa ahịa òkè. N'ime ndị ahụ, akara ngosi ngosi ngosi ọhaneze zuru ụwa ọnụ nke ọma ruru nde USD 854 na 2016. N'ihe banyere ego nke ndị nrụpụta, ndị nrụpụta asaa kachasị si China, Daktronics na-ewerekwa nke asatọ. Na nnukwu na-eduga mmetụta, n'elu 8 emepụta kpamkpam weghara 78% nke uwa ahịa òkè, LEDinside eme atụmatụ na zuru ụwa ọnụ Ikanam ezi pitch ngosi ahịa ga-anọgide na-enwe ngwa ngwa na-eto na 2017.
Ikanam Market Trend
Ngosipụta ahịa ahịa ngosi na 2017 a na-atụ anya ịbịa USD 1.63 ijeri, ma buru amụma na USD 1.94 ijeri na 2021. Ọganihu nke ngosi ọkụ ọkụ ọkụ na-akwụsịlata, mana ngosi ngosi ngosi dị mma ka bụ isi ike maka ịkwalite ihe ngosi ọkụ LED. .
Dabere na LEDinside, ndị na-emepụta ihe ngosi ọkụ dijitalụ ise kachasị elu na gburugburu ụwa bụ MLS, NationStar, Everlight, Kinglight na CREE. Tụkwasị na nke ahụ, ndị na-emepụta ihe ngosi dijitalụ ise nke LED na-emepụta site na ego ha nwetara (ahịa mpụga) gburugburu ụwa bụ San'an Opto, Epistar, HC Semitek, Silan Azure na ChangeLight.
Nddị Ọkwọ ụgbọala IC
N'ịbụ nke ezi ngosi ọkụ gosipụtara, ihe ngosi ọkwọ ụgbọala ICs na-egosi na ọ na-eto ngwa ngwa. LEDinside mere atụmatụ na ngosipụta ndị ọkwọ ụgbọala ICs ahịa ruru USD 212 nde na 2017. Dabere na nchọpụta LEDinside, ndị nrụpụta ise mbụ nke ihe ngosi ICs ngosi bụ karị Macroblock, Chipone, Sumacro, Sunmoon, na My-Semi, nke na-anọchite anya 92% nke ahịa niile. kesaa. Ndị nrụpụta ndị ọzọ gụnyere Developer Microelectronics na Texas Instrument, wdg.
Na nzaghachi na ahịa na-ada na warara pitch, Ikanam aga n'ebe atọ teknụzụ, gụnyere COB ezi pitch Ikanam, QD phosphor esịmde RGB Usoro, na Micro Ikanam ngosi. Ọzọkwa, uru nke Micro LED ngosi na-agụnye oghere elere anya dị elu, nchapụta dị elu na ọdịiche, ogo foto kachasị elu, na enweghị ntụpọ Image. Ka ọ dị ugbu a, ndị na-eme ihe ngosi ọdịnala na ndị na-eme egwuregwu LCD na-ezube ịbanye ahịa ngosi Micro LED site na nkwado na mmekorita.
Post oge: Mar-26-2021